Janaayo 2015 | RayHaber | raillynews
Bilaha: Janaayo 2015
Lodos ee saqafka saqafka ee tareenka ayaa dhaawici kara siligga taraamka
Magaalada Bursa, saqafka lodos wuxuu ku dhuftay fiiladaha tareenka: waxay wax ku ool tahay Gobolka Marmara waxayna sababtay jajabinta geedaha iyo saqafkii goobihii shaqada. Magaalada Bursa, markay duullimaadyo bir ah oo ganacsigu wax u dhinto fiilooyinka tareenka, gaadiid [More ...]
Waxyaabaha aanan ka ogaanin Tareenada: Waa maxay Socotada?
Waa maxay hurdo-hurdo? Iyada oo la raacayo nooca wareejinta rarka tareenka, waxay u gudbisaa oo u qaybisaa xoogagga ku shaqeeya tareenka illaa lakabka ballaadhan iyada oo ku fidaysa meel ballaaran, baaris iyo ilaalinta nadiifinta wadada iyo ka ilaalinta wadada ka soo horjeedka waxyeelada. [More ...]
Danta weyn ee Mashruuca Tareenka Qaranka
Xiiso weyn ayaa u leh Mashruuca Tareenka Qaranka: Iyada oo ku eg baaxadda Mashruuca Tareenka Qaranka ee Tren X, ku dhawaad ​​mashruuca 1500 waxaa loo fulinayaa isku mar si loogu dhiso tareenka cusub ee la dhisi doono, gaar ahaan cusboonaysiinta tareenka iyo howlaha dhismaha xarunta. 2023 [More ...]
Bursa waxay sidi doontaa bartilmaameedka ugu sareeya OSB ee bartilmaameedyada 2023
OSB teknolojiyadda Sare ayaa qaadi doonta Deeqda-waxbarasho ee Bartilmaameedka 2023: Aagga warshadaha cusub ee abaabulan (OSB), oo ka dhigi doona Bursa xarunta maal-gashiga tikniyoolajiyada sare, ayaa looga dooday Golaha Magaalada. Magacyada ugu horreeya ee magaalada ayaa ah [More ...]
Xatooyo telefishan oo Romaan ah ayaa barbar dhigaya hawlgallada tareenka
Tuugta Roomaania ee curyaamiinta ah ayaa curyaamiyey tareennada: Danmark, tareennada waa la joojiyay tuugada fiilooyinka. Toddobaad gudihiis tuugada fiilooyinka, malaayiin taaj oo xarig ah oo u dhow xarumaha Hundige, Köge, Armarken iyo Hilleröd [More ...]
Saldhigga Mahmutbey-Mecidiyeköy (Sawir Sawir)
Dhismaha Wadada Tareenka ee Mahmutbey-Mecidiyeköy waa la Balaadhin doonaa: Duqa Magaalada Istanbul Metropolitan Municipal (IMM) Kadir Topbaş wuxuu kahadlay mashruuca metro Mahmutbey-Mecidiyeköy. Duqa Magaalada Istanbul ee Magaalada (IMM) Kadir Topbaş wuxuu yidhi, “Khadkan waxaa loo xilsaaray. [More ...]
2019 wuxuu dhererka dhererka 430 ku yeelan doonaa XNUMX
Istanbul 2019 waxay lahaan doontaa dhererka nidaamka tareenka xNUMX kiiloomitir: Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Istanbul. Kadir Topbaş, "Markii aan gaarno 430 2019 kiiloomitir dhererkiisa tareenka ayaa lahaan doona," ayuu yidhi. Istanbul, oo billowday shaqadii Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro [More ...]
Kumanaan kun oo rakaab ah ayaa la geyn doonaa nidaam tareen oo ku yaalla Gaziantep
Magaalada Gaziantep, 120 kun oo rakaab ah ayaa maalin walba la rari doonaa iyada oo la raacayo nidaamka laba-tareenka: Gaziantep Duqa Magaalada Fatma Şahin, isagoo sharraxaya howlaha laga fulinayo magaalada iyadoo la raacayo qorshaha guud ee Gaziantep ee gaadiidka, buundada 2105 ee 5 [More ...]
Maanta taariikhda: 31 Janaayo 1927 Ankara Saldhigga Hotel iyo Restaurant Patisserie waa la furay
Maanta, 31 January 1927 Ankara Station Hotel iyo Restaurant Patisserie ayaa la furay taariikhda. 31 Janaayo 2009 Shiikhhane iyo farsamoyinka baabuurta Atatürk waxay bilaabeen inay u adeegaan.
Baraf dabiici ah oo ka timid DemacLenco ilaa Silvretta Montafon Ski Center ee Austria (Video)
Baraf aan dabiici ahayn oo ka imanaya DemacLenco una socdaa Silvretta Montafon Ski Resort ee Austria: Xaruntii Silvretta Montafon Ski Resort ee ku taal gobolka Vorarlberg ee Austria waxay ka kooban tahay isku xira 140 oo iskuxiran. Ku adeegsiga dalxiiska jiilaalka wadarta gawaarida 7 ee gawaarida [More ...]
Palandökan waxay hoos u dhacdaa qulqulka macmalka ah ee badbaadada
Waxay sameeyaan dariiqyo aan dabiici ahayn oo loogu talagalay nabadgelyada wadooyinka tareenka ee Palandöken: Dariiqyada biraha, falanqaynta lakabka barafka iyo kontaroolada ayaa si maalinle ah u fuliya guddiga sahaminta hawada ee Palandöken Ski Center. [More ...]
Erciyes waxaa lagu raaxeystaa ciyaaraha barafka
Waxaa jira adh u socdaalaha barafka ee loo yaqaan 'Erciyes ski ski': Dalxiisayaasha gudaha iyo shisheeyaha ah waxay bilaabeen inay u qulqulaan Xarunta Erciyes Ski Resort oo leh nasashada semesterka. Mehmet Eğlenceoğlu, oo ka mid ah milkiilayaasha isboortiga barafka, ayaa sharraxaad ka bixiyay wuxuuna qaatay nasashada semesterka. [More ...]
Miyuusigga bilawga ah ee 11 ee ku dhaawacmay hoos u dhac
Ciyaaraha bilowga ah ee 11 waxaa ku dhaawacmay dhicis: qof 11 ah oo ku dhacay intuu baraf kulahaa Xarunta Kayseri Erciyes Ski Center ayaa ka faa'iiday meelo kala duwan. Kayseri ee Gobolka Gendarmerie Taliska dhacdooyinka maalinlaha ah wuxuu faafaahin ka bixiyaa dhaawaca 11 gaar ah [More ...]
Bartilmaameedka Kartalkaya 250 kun oo dalxiis: roobka culus kadib, dhumuc baraf ah oo ku dhow 3 mitir oo ku yaal 6 huteel Kartalkaya, ayaa hadafkiisu yahay inuu martigeliyo 250 kun oo dadka u dalxiiseeya dhamaadka xilli ciyaareedka. Qabowga barafka 3 [More ...]